साफ च्याम्पियनसिप माल्दिभ्समा हुने
१३ औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिता अक्टोबर १ देखि १३ सम्म माल्दिभ्समा आयोजना हुने भएको छ ।सोमबार बसेको दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ (साफ) को कार्यकारी समितिको बैठकले प्रतियोगिता आयोजनाको जिम्मा माल्दिभ्सलाई दिने निर्णय गरेको अखिल नेपाल फुटबल संघ(एन्फा)का महासचिव इन्द्रमान तुलाधारले जानकारी दिए ।१३ औं साफ च्याम्पियनसिपमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, माल्दिभ्स र श्रीलंकाले खेल्ने […]
साफ च्याम्पियनसिप : फाइनलको होडमा चार देश
काठमाडौं : माल्दिभ्समा जारी १३ औं साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा फाइनलमा पुग्ने सम्भावना चारवटै देशको यथावत छ। नेपाल र बंगलादेशसँगै आयोजक माल्दिभ्स, सात पटकको च्याम्पियन भारतको पनि सम्भावना उत्तिकै छ।बलियो सम्भावना बनाएको नेपालका लागि आइतबारको नतिजाले अन्य देशको सम्भावनालाई पनि उजागर गरेको छ। चारवटै खेल खेलिसकेको श्रीलंका भने भारतसँगको खेलमा बराबरी खेले पनि अन्य खेलमा हार ब्यहोर्दै प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेको छ।आइतबार नेपाल भारतसँग तथा श्रीलंका माल्दिभ्ससँग समान १–० गोल अन्तरले पराजित भएका छन्।
थाहा खबर भाद्र २०७८
साफ च्याम्पियनसिप- नेपालसँग माल्दिभ्स १–० गोलअन्तरले पराजित
काठमाडौँ-माल्दिभ्समा जारी १३ औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिप–२०२१ अन्तर्गत गएराति भएको खेलमा नेपालले विजय सुरुवात गरेको छ । पहिलो खेलमा आयोजक माल्दिभ्सलाई १–० गोलअन्तरले हराउँदै नेपालले सुखद सुरुवात गरेको हो । मालेस्थित राष्ट्रिय फुटबल स्टेडियममा नेपाललाई जित दिलाउन मनिष डाँगीले खेलको ८६ औं मिनेटमा गरेको गोल नेपालका लागि निर्णायक बन्यो । माल्दिभ्सले भने हारबाट प्रतियोगिताको सुरुआत […]
Khabarhub भाद्र २०७८
साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपालको बिजयी सुरुवात, माल्दिभ्स बिरुद्द शानदार जित
माल्दिभ्समा जारी साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको १३ औं संस्करण अन्तर्गतको पहिलो खेलमा नेपालले बिजयी सुरुवात गरेको छ। आयोजक माल्दिभ्सलाई १ गोलले पराजित गर्दै साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको १३ औं संस्करणमा नेपालले बिजयी सुरुवात गरेको हो। मनिस डाँगीले ८६ औं मिनेटमा माल्दिभ्स बिरुद्द शानदार गोल गर्दै नेपाललाई जित दिलाएका हुन्। यससंगै नेपालले प्रतियोगितामा ३ अंक जोड्न सफल भएको छ। बंगलादेशसँगै शीर्ष स्थानमा रहेको छ ।नेपालका लागि सब्स्टिच्युट खेलाडीका रूपमा मैदान प्रवेश गरेका डाँगीले मैदानको मध्य भागबाट बल अगाडि बढाएर दुई प्रतिद्वन्द्वी खेलाडीलाई कटाएर गोल गर्न सफल भएका हुन्। दोस्रो हाफको सुरुआतदेखि नेपाल केही आक्रामक देखिएको थियो र अन्तत: यसले नतिजा पनि देखायो । खेलको ५९ औं मिनेटमा नेपालका लागि किरण लिम्बूले उत्कृष्ट बचाउ गरेका थिए। पहिलो हाफमा बराबरी खेलेको नेपालले दोस्रो हाफमा उत्कृष्ट प्रदशन गर्दै जित निकाल्न सफल भएको हो। खेल नेपाली समयअनुसार ९ः४५ बजे सुरू भएको हो। आजको खेलसंगै नेपालले माल्दिभ्सलाई ५ पटक हराएको छ भने ४ खेलमा बराबरी तथा ९ खेलमा पराजित भएको छ। साफमा नेपालसहित भारत, बंगलादेश, श्रीलंका र आयोजक माल्दिभ्स गरी पाँच टिमबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। नेपालसहित पाकिस्तान र भुटानले अहिलेसम्म साफको उपाधि जित्न सकेका छैनन् । यी टिम अहिलेसम्म फाइनलमै पुग्न सकेका छैनन्।
Bizpati भाद्र २०७८
साफ च्याम्पियनसिपमा माल्दिभ्सविरुद्ध कस्तो रहला नेपालको प्रदर्शन ?
साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा आज आयोजक माल्दिभ्स र नेपालबीच भिडन्त हुँदैछ । यो खेल नेपाली समयअनुसार ९ बजेर ४५ मिनेटमा सुरु हुनेछ । राउन्ड रोबिन लिगका आधारमा हुने यस संस्करणको प्रतियोगितामा पाँच टिम सहभागी छन् । सहभागी पाँच टिममध्ये शीर्ष स्थानमा रहने दुई टिमले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । दुईपटक साफ च्याम्पियनसिप जितिसकेको माल्दिभ्सले घरेलु मैदानमा भने उपाधि जित्न सकेको छैन । त्यसैले यसपटक राजधानी माले शहरमा आयोजना हुने प्रतियोगितालाई लिएर माल्दिभ्स निकै उत्साहित छ । सन् २००८ मा माल्दिभ
साफ च्याम्पियनसिप : अहिले नभए कहिले ?
सुबास हुमागाईं, काठमाडौं नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले शुक्रबार आयोजक तथा साविक विजेता माल्दिभ्सविरुद्ध खेल्दै साफ च्याम्पियनसिप २०२१ मा यात्रा सुरु गर्दैछ । इतिहासकै सबैभन्दा लामो तयारीका साथ माल्दिभ्स पुगेको नेपाली टोलीका लागि यसपटक आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने चुनौती छ । कम्तिमा फाइनल पुग्न नसके टोलीको एक वर्षभन्दा लामो तयारी व्यर्थ नै हुनेछ । एक वर्षअघि बंगलादेशविरुद्ध मैत्रीपूर्ण […]
Hamro Khelkud भाद्र २०७८
शुक्रबारदेखि साफ च्याम्पियनसिप, अलमुताइरीको अग्नि परीक्षा
असोज १०, काठमाण्डौ । शुक्रबारदेखि माल्दिभ्समा शुरु हुन गईरहेको साफ च्याम्पियनसिपको उद्घाटन खेल तालिका परिवर्तन गरिएका् छ । दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ (साफ) ले यसअघि उद्घाटन खेलमा नेपाल र आयोजक माल्दिभ्स भिड्ने कार्यक्रम रहेकोमा परिवर्तन गर्दै पहिलो श्रीलंका र बंगलादेश भिड्ने जानकारी दिएको हो । माले सिटी स्थित नेशनल फुटबल स्टेडियममा हुने श्रीलंका र बंगलादेशबीको […]
साफ च्याम्पियनसिप : पहिलो पटक च्याम्पियन बन्ने नेपालको लक्ष्य
१४ असोज, काठमाडौं । शुक्रबारदेखि माल्दिभ्समा १३औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिप फुटबल सुरु हुँदैछ । २८ वर्षको इतिहास बोकेको साफ च्याम्पियनसिपको उपाधि नेपालले अहिलेसम्म जित्न सकेको छैन । उपाधिको कुरा छाडौं, नेपाल अहिलेसम्म फाइनलमा पनि पुग्न सकेको छैन । यसपटक च्याम्पियन बन्ने लक्ष्यसहित किरण कुमार लिम्बु (चेम्जोङ) को कप्तानीमा नेपाली टोली सोमबार माल्दिभ्स पुगिसकेको छ । […]
अनलाइनखबर भाद्र २०७८
नेपाली फुटबल टोली माल्दिभ्स पुग्यो, पहिलो खेल असोज १५ मा माल्दिभ्ससँग हुने
एजेन्सी । दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठूलो फुटबल प्रतियोगिता साफ च्याम्पियनसिपमा प्रतिस्पर्धा गर्न नेपालको राष्ट्रिय फुटबल टोली हिजो माल्दिभ्स पुगेको छ । माल्दिभ्सको मालेमा यही असोज १५ देखि ३० गतेसम्म साफ च्याम्पियनसिप आयोजना हुँदैछ । प्रतियोगिताको लागि झण्डै दुई साता कतारमा अन्तिम प्रशिक्षण गरेको नेपाली टोली हिजो त्यतैबाट माल्दिभ्स पुगेको हो । नेपालले प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा […]
साफ च्याम्पियनसिप खेल्न नेपाली फुटबल टिम माल्दिभ्समा
काठमाडौँ- साफ च्याम्पियनसिप खेल्न नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम माल्दिभ्स पुगेको छ । साफ च्याम्पियनसिपको तयारी खेलहरु सकेर नेपाली टोली कतार माल्दिभ्स पुगेको हो । नेपाली टिम सोमबार माल्दिभ्स जानअघि भारत र ओमानसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको छ । आइतबार राति भएको मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल ओमानसँग ७-२ गोल अन्तरले पराजित हुँदा भारतसँग नेपालमा भएको मैत्रीपूर्ण खेलमा एक […]
नेपाललाई साफ च्याम्पियनसिप आयोजना गर्न प्रस्ताव
नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं । बंगलादेशले दक्षिण एसियाली फुटबल प्रतियोगिता (साफ च्याम्पियनसिप) आयोजना गर्न नसक्ने भएपछि सोको आयोजना गर्न नेपाललाई आधिकारिकरूपमा प्रस्ताव आएको छ । आउँदो अक्टोबरमा आयोजना गर्न सहमति भएकोमा साफ बैठकले नेपाललाई प्रस्ताव राखेको हो । तर, नेपालसँगै माल्दिभ्स र भारतले पनि प्रतियोगिता आयोजना गर्न दाबेदारी प्रस्तुत गरेका थिए । प्रतियोगितामा ५ टोलीले मात्र […]
नेपाल समाचारपत्र आषाढ २०७८